Fanomezam-boninahitra sy fanekena amin'ny sehatra ara-pananahana - Lalao an-dalao
Fitaovana, karavasy, fahafinaretana
Herisetra tsy misy heriny
Amin'ny fotoana izay ahazoana alalana ny zava-drehetra ary tsy misy mangozohozo intsony, dia sarotra ny miaina sy miaina eroticism. Ny fanimbazimbana tsy an-kijanona dia nahatonga ny ankabeazan'ny olona ho feno erotisma sy firaisana ara-nofo. Tsy manana ny fofon'ireo voarara izy, ary avy eo no nipetrahan'ny erotika indray mandeha.
Fitiavana, faniriana ary lalao
Saingy ny olona amin'ny fahatsorany dia loharano fanavaozana sy fanavaozana tsy tapaka. Noho izany dia nahavita niaina fiainam-baovao ihany koa izy.
Tsy maintsy mikaroka zavatra ianao, saingy mbola nahita zavatra izay somary taboro kely ihany ianao ary noho izany dia voahodidin'ny auran'ny mistery sy voarara.
Ny antsasaky ny fifandraisana dia mihanaka kokoa sy mihen-dàlana, mety tsy dia kely indrindra noho ny filazana tsy ara-dalàna momba ny firaisana ara-nofo.
Izany dia niakatra ho any amin'ny mpivady mba tsy hahita olana andavanandro ihany ny marimaritra iraisana izay rehetra afaka miaina tsara, fa mba mamorona vaovao foana tamin'ny fomba firaisana ara-nofo sy ny mamaritra.
Matetika dia misy zavatra vaovao, toy izany koa.
Samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay, fa tsy ny fisainana fotsiny ihany, fa ny fantasy ihany koa, ny erotic fantasy dia ho voafaritra kokoa. Zavatra tsy ampy na rakitra izay mitondra ilay olona efa lasa tombony mahafinaritra, raha mieritreritra izany fotsiny. Matetika dia tsy mahafa-po ireo faniriana erotic ireo satria tsy mifampiresaka mivantana izy ireo ary mazava tsara amin'ny mpiara-miasa. Saingy tsy voatery ho izany, satria na ny mpiara-miasa aza dia maniry faniriana hanao firaisana ara-nofo, izay tiany hiainana.
Tsy mampisambotra ny mpivady ny tenany ho eto ny fahafahana mifanohitra izy hanampy ny catapult any amin'ny ambaratonga manaraka ny eroticism - ary mitaky na inona na inona mihoatra noho ny resaka fohy.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny faniriana miafina dia mahalana ... fa iza no te ho ara-dalàna? Tsy misy! Marina fa misy mahatsara kokoa ny sasany amin'ny nofinofisin'ny sasany, nefa mitovy daholo ny zava-drehetra ary mitovy ny miezaka manandrana azy.
Ny herim-po ho an'ny vaovao eto dia ny teny fototra
Mpivady maro no matetika gaga amin'ny fialam-boly azon'izy ireo hita ao amin'ny fomba amam-panao vaovao ara-piraisana ary ny vokatra tsara dia tsara ho an'ny fiainam-pianakaviana mahafa-po kokoa.
Ny firaisana ara-nofo mahazatra eo amin'ny olona maro dia midika hoe fanandevozana isan-karazany. Ary tsy dia zava-baovao izany. Voaporofo fa ny fanandevozana sy ny toy izany tamin'ny alalan'ny tantaram-pirazanana tanteraka amin'ny olombelona dia fomba fijery ara-pananahana.
Ny fitondrantena ara-nofo
Tamin'ny Moyen Âge mora tafintohina, tahaka ny any Roma fahiny hafahafa na ny kolontsaina avy any Mesopotamia aloha dia mahagaga loatra na inona na inona momba ny hatsarany manaitaitra manokana avy amin'ny fahandevozana, dia ny amin'ny mpiara-miasa na ho tenany maintsy hahazo.
Ny fomba hanamboarana olona dia tena be dia be ary koa ny toerana ahafahana mitondra fahafinaretana goavana.
Amin'ny maha-vao haingana ny lalao amin'ny lalao fanandevozana erotic, tokony ho mora aminao amin'ny voalohany izany. Tsy midika izany fa tsy afaka ny ho masaka izany! Ny iray ihany angamba dia tokony tsy ho avy tsy ho ela amin'ny dingana feno alohan'ny handramana hidirana ilay raharaha, fa miadana miadana. Satria indraindray be loatra ny hafanam-po mety hamarana ny fanandramana aloha - ary tsy tokony havelanao hikorontana be loatra ny zavatra tena mahafinaritra noho ny maha-henjana azy. Ao anatin'ny fahanginana no misy ny hery.
Ny fomba tsara indrindra hanombohana ao an-trano ary ny tsara indrindra any am-pandriana. Satria ny fandriam-bahiny no manome ny safidy tsara indrindra amin'ny fanandevozana. Ny pensilihazo, ny loha sy ny tongotra dia tena ilaina toy ny tongotry ny fandriana na ny kofehy.
Ankoatra izay, ny safidin'ny fitaovana, izay tokony hanamafisana ny mpifaninana aminy, dia tokony hatao tsara. Tsara kokoa ny mitraka amin'ny fitaovana mora kokoa. Ny loko tsara tarehy angamba na tady malefaka - ny hoditra sy ny lamosina dia mbola hanam-potoana aorian'izay (ary mitaky fampiharana bebe kokoa).
Tsy misy naoty mafy loatra amin'ny voalohany. Na dia mila mangataka izany aza ilay namana. Indraindray dia mitranga izany fa tsy afaka manokatra intsony ny kibay intsony ... raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia afaka misintona ny knots amin'ny azy manokana mandritra ny asa. Izany no antony tsy misy maharatsy azy.
Izany no mahatonga azy io hatrany am-piandohana: Azo atao ny zavatra rehetra, fa aza maika ny zavatra rehetra!
Ny olona sasany dia tia ny fampiasana fahefana amin'ny hafa, na ara-batana izany na ara-tsaina. Ny olon-kafa kosa, etsy ankilany, dia maniry ny hanjakazakan'ny olona iray hafa - indray ara-batana sy ara-tsaina.
Mety hisy antony maromaro amin'izany. Matetika ny olona mankatò eo amin'ny fiainana andavanandro dia firaisana ara-nofo be indrindra ny olona momba ny toerana lehibe indrindra ao amin'ny orinasa raha tsy mafy orina footing. Toy izany koa tamin'ny olona izay manjaka mety ho saro-kenatra downright ivelan'ny efitra fatoriany. Mitady izay tsy anananao foana ianao - amin'ny sehatry ny fanaovana firaisana.
Ny "sehatry ny asa" ataon'ny mpitondra sy ny mpanolotsaina dia saika tsy voafetra. Matetika ireo lalao fanandevozana voalaza taloha dia ampiasaina hanehoana ny andraikitry ny mpiara-miasa tsirairay. Mazava ho azy fa afaka mandeha lavitra kokoa noho ny lalao fanandevozana "marina" fotsiny izy io.
Ny sasany amin'ireo mpankasitraka dia mahatsapa ho manintona manokana amin'ny fanaintainana ara-batana. Mba hamoronana ity fanaintainana ity, afaka mampiasa fitaovana isan-karazany ianao - izany hoe karavasy, karavasy na klioba na kibay. Ny sasany toa mafy kokoa noho ny hafa.
Fa fanaintainana ara-tsaina dia tsy mahazatra ao amin'ny efitra fatoriana ny mpivady miaraka amin'ny fironana amin'ny fitondrana lalao. Amin'ny alalan'ny teny na attenuated ampy fomba tena ara-tsaina fampijaliana, ratra lalina ara-tsaina mety ... mazava ho azy fa tsy maharitra ary ampiasaina ihany no faniriana mitombo tamin'ny fotoana nanaovana ny hetsika.
Tokony hitandrina ianao mba tsy handratra izany. Alohan'ny handehananao tsirairay dia tokony atao amin'ny teny hoe "teny azo antoka" miaraka amin'ilay mpiara-miasa. Raha antsoina io teny azo antoka io, ny hetsika rehetra dia tsy maintsy atao tampoka sy tsy misy fanoherana. Vokatr'izany, amin'ny maha-mpankasitraka anao, dia manana antoka ianao fa tsy ho voaro mafy loatra.
Ny mpitsidika sasany eo amin'ny sehatra dia milaza fa tokony "hitsahatra rehefa tonga ra", miaraka amin'ny hafa, avy eo fotsiny ny fialam-boly tonga lafatra. Lohahevitra iray tena samihafa izay tokony hitsapan'ny tsirairay ny fetrany manokana. Tsy misy firaketana an-tserasera maneran-tany ny habetsaky ny fanaintainana tokony hatrehina na ampiasaina ho an'ny fampiasana ny firaisana ara-nofo. Saingy mitoetra: Ny zava-drehetra amin'ny fanamafisana.